शिल्पाले पहिलोपटक पतिको गिरफ्तारीबारे आफ्नो धारणा गरिन् सार्वजनिक ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
शिल्पाले पहिलोपटक पतिको गिरफ्तारीबारे आफ्नो धारणा गरिन् सार्वजनिक !
१९ श्रावण २०७८, मंगलबार ००:००
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले पोर्न फिल्मसम्बन्धी मामिलामा पति राज कुन्द्राको गिरफ्तारीपछि पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उनले सोशल मिडियामार्फत आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले आफू र आफ्नो परिवारको गोपनीयताको सम्मान गर्न पनि मिडियालाई आग्रह गरेकी छन् ।
राज कुन्द्रालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनकी पत्नीको नाताले शिल्पा पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ भइरहेकी छन् । यसै सन्दर्भमा दुई पेज लामो नोट लेख्दै उनले ‘मिडिया ट्रायल’ बन्द गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
प्रस्तुत छ, शिल्पाले लेखेको नोटको नेपालीमा भावानुवाद-
हो, केही दिन यता हरेक प्रकारले मुस्किल रह्यो । हामीमाथि कयौं आरोप लागे र भ्रम फैलाइए । मिडिया र मेरा कथित शुभचिन्तकले मेरो र परिवारका बारेमा कयौं कुरा भने । मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई ट्रोल गरिएको छ । हामीमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
यो मामिलामा मेरो धारणा अहिलेसम्म केही आएको छैन र आगामी दिनमा पनि म चुप रहन्छु । मेरो नाममा झुटो कुरा नबनाउनुस् ।
एक सेलिब्रेटीका रुपमा मेरो दर्शन भन्नु नै कहिल्यै गुनासो नगर्नु र कहिल्यै सफाइ नदिनु नै हो । म यतिमात्र भन्छु कि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । मलाई मुम्बई प्रहरी र भारतको न्यायालयमाथि भरोसा छ ।
एक परिवारका रुपमा हामीले कानुनी मद्दत लिइरहेका छौं । त्यतिन्जेलसम्म म तपाईहरुसँग निवेदन गर्दछु, खासगरी एउटी आमाका रुपमा कि हाम्रो बच्चाका लागि हाम्रो परिवारको गोपनीयताको सम्मान गरिदिनुुस् । साथै म निवेदन गर्दछु कि आधा-अधुरा जानकारीमाथि वास्तविकता नबुझिकन प्रतिक्रिया दिन बन्द गर्नुस् ।
यसअघि शिल्पाले राज कुन्द्रा गिरफ्तारीपछि विभिन्न मिडियामा आएका समाचारले आफूहरुको मानहानि भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
उनले विभिन्न २९ मिडिया संस्थान र पत्रकारमाथि झुटो समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित गरेको आरोपसहित २५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दिएकी थिइन् ।
शनिबार उक्त मुद्दामा भएको सुनुवाईमा उनीहरुका बारेमा समाचार लेख्दा मानहानी नभएको अदालते ठहर गरेको थियो । अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाई सेप्टेम्बर २० मा हुने गरी तोकेको छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदालतले विभिन्न स्रोतलाई उद्धृत गरी प्रकाशित भएको समाचारलाई प्रथम दृष्टिमै मानहानि मान्न नसकिने ठहर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: Aug 3, 2021
पोनोग्राफी प्रकरणमा पक्राउ परेकाबलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
बिग बोस-१५ का लागि सलमानलाई ३५० करोड पारिश्रमिक दिइने
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई बिग बोस-१५ को नयाँ सिजनको प्रस्तोता बन्नका लागि ३५० करोड भारु
अभिनेता सोनुमाथि लाग्यो २० करोड आयकर छलीको आरोप !
बलिउड अभिनेता सोनु सुदमाथि भारतको आयकर विभागले २० करोड रुपैयाँ करछलीको आरोप लगाएको छ ।
शिल्पालाई शर्लिनको कटाक्ष : पतिको सम्पतिबारे थाहा छैन भन्नुमा कति सत्यता छ आफै अनुमान लगाउनुहोस् !
पछिल्लो समयमा भारतमा पोर्नोग्राफी प्रकरण बढ्दो देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरी लागि
म आफ्नो काममा असाध्यै व्यक्त थिएँ !मेरो श्रीमानले के गरिरहेका छन् थाहै भएन : शिल्पा शेट्टी
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्र पोर्नोग्राफी केसमा पक्राउ परेका छन् । पछिल्लो सयमा कुन्द्रामाथी
अभिनेत्री आलियाको कठिन योगको तस्वीर भयो भाइरल !
बलिउडकी चर्चीत अभिनेत्री मध्ये अभिनेत्री आलिया भट्ट एक हुन् । उनले दर्शको सामु धेरै राम्रो